ငွေနဲ့ လဲခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ငွေနဲ့ လဲခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
ငွေနဲ့ လဲခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
Posted by etone on May 31, 2012 in My Dear Diary, Society & Lifestyle | 32 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း မိမိကိုယ်ကိုရောင်းစားခြင်း
ဒီနေ့ ဒီအချိန်နဲ့ ကြည့်လျှင် ကျွန်မပြောပြမယ့် အကြောင်းရာလေးက ကြားရသူအတွက် အထူးဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်နဲ့ နှိုင်းလျှင်တော့ ၊ သူများကိစ္စကိုယ့်ကိစ္စလိုသဘောထားတတ်တဲ့ ကျွန်မတို့ လူမျိုးများအကြားမှာတော့ အလွန်နားကြားပြင်းကပ်စရာသတင်းမျိုး၊ လူတိုင်းအော့နှလုံးနာစရာ သတင်းမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် ။
သူများအကြောင်းရေးပြန်လျှင်လည်း ဒေါကန်ကြဦးမှာ မြင်ယောင်လို့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် ၊ မသိသလို မျက်နှာလွှဲနေလိုက်ပေမယ့် မမြင်ချင်မှ အဆုံး ၊ ခဏခဏ မြင်ကွင်းထဲရောက်လာတဲ့ အဖြစ်ရယ်ကြောင့် ၊ အတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် ပြောတော့မယ်ဗျို့ … အဟီး
<b>နွားအို မြက်နုကြိုက်</b>ဆိုတဲ့ စကားပုံရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အတော်များများ နားလည်ကြမှာပါနော် ။ ဒီလိုပါပဲ ဇရာအိုနဲ့ ကညာဗျို ဇာတ်ကားကိုလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါပဲ ။ အသက်ကြီးသူနဲ့ အသက်ငယ်သူ ချစ်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပေါင်းဖက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို … အနည်းနဲ့ အများတော့ ခံရစမြဲပေ့ါ … (ဒါမြန်မာပြည်ကိုး ဟီး ) ဒါပေမယ့်လည်း …ကာယကံရှင်တွေကတော့ <b>ကြီးလျှင်မှီ ငယ်လျှင်ချီ</b>ဆိုတဲ့ စကားပုံကို လက်ကိုင်ထားပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ၊ ကိုယ့်သဘောကိုယ်ဆောင် နေကြပြန်ရဲ့ …. ၊ ကျွန်မဒီလောက် စကားဦးတွေ သန်းနေတာ ပြောမယ့် အတင်း ..အဲအကြောင်းကတော့ … အသက်ရွယ်ကွာခြားလွန်းသူ နှစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းဆိုတာ ၊ ရွာသူရွာသားတို့ ရိပ်မိလောက်ပြီထင်ပါရဲ့နော် ။ ဟုတ်ပါတယ် …. ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်ဆိုပေမယ့် … အသက်ကြီးနဲ့ ငယ်လွန်းသူ အိမ်ထောင်ပြုတာထက် …. တရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ … မိန်းမတို့ရဲ့လူနေမှုစရိုက်နဲ့ စိတ်ဓါတ်ခံယူချက်တွေ ပြောင်းလဲလာတာကို သိသာစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်ပါတယ် ။ (မှားတာချိလျှင် ၀န္ဒာမိပါချင့် ဟိ )
ကျွန်မတို့နဲ့ ဆွေမျိုးမကင်းသူလို့ပဲ ပြောရမလား ၊ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးလို့ပဲ စပ်သလား ၊ ဘယ်လို စပ်ရမှန်း မသိတဲ့လူ အသက်လေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ်နားကပ်နေတယ် ဒုဗိုလ်မှုကြီးတစ်ယောက်က ဆယ်တန်းတောင် မဖြေရသေးတဲ့ကလေးမလေးကို ယူလိုက်ခြင်းပါ ။
အဲ့ဒီသတင်းကို ကြားကြားချင်း ကျွန်မလည်း ကိုယ့်နားကိုယ်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ် ။ မိသားစုအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ် ၊ စစ်တပ်ထဲ ရာထူးကြီးသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ၊ ဘာသာတရားဘက်မှာရော ထုံးတမ်းစဉ်လာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဘက်မှာရော အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ လူမျိုးက ဒီလို ကိစ္စတွေ လုပ်တယ်ဆိုတော့ လူတွေ ဘာစိတ်ပေါက်ကုန်ပြီလဲလို့ …. ယောင်ယောင်တမ်းတမ်းဖြစ်မိပါတယ် ။ အမျိုးသားက အသက်လေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ်နားကပ်နေပါပြီ ။ ဗိုလ်ဘ၀ကတည်းက လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ မိန်းမ နဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားကို ကွာပြီး ၊ ဆယ်တန်းတောင် မတတ်ရသေးတဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ ယူလိုက်သတဲ့လေ ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာ သူ့သားထက်တောင် တနှစ်လောက်ငယ်နေပါသေးတယ် …. ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ပါ ။ မသတီစရာကောင်းပေမယ့် …. ကျွန်မတို့ကန့်ကွက်ခွင့်မရှိသလို ၊ ဆိုင်လည်းမဆိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လူ့စိတ်ဆိုတာကလည်း ခက်သားလားရယ် ၊ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တာကိုမှ စပ်စုချင်မိတယ် ၊ အထူးသဖြင့် ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကုန်တယ်ဆိုတာ စူးစမ်းချင်မိပါတယ် ။
မရှိမရှားအရာရှိဘ၀တုန်းကတော့ မိန်းမဖြစ်သူမှာ ပင်ပန်းလိုက်တာလည်း လွန်ပါရော ၊ တပ်ကိစ္စလုပ်ရ ဖက်ထိတ်တွေလည်း လုပ်ရ ၊ ယောကျာ်းလည်း ပြုစုရ ၊ ဒါ့ပြင် အထက်လူကြီးရဲ့ မိန်းမက လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းတာလည်း သွားလုပ်ရနဲ့ ဒါပေမယ့်လည်း ငယ်ချစ်တွေဆိုတော့ အမျိုးသမီးက သည်းခံရှာပါတယ် ။ တပ်ထဲမှာတင်မကဘူး မိဘဆွေမျိုးများရော၊ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတန်းစားစုံ အကြားမှာပါ အပေါင်းသင်းပြေပြစ်သူအဖြစ် နာမည်ရခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့မှာ သားလေးထွန်းကားတော့ တစ်ဦးတည်းသောသားမို့ ငုံထားမတတ်ချစ်ခဲ့ကြတယ် ။တဖြည်းဖြည့်းရာထူးတွေလည်း အဆင့်ဆင့်တက်ခဲ့ပြီး မိန်းမကလည်း အနေထိုင်ကျစ်လစ်ကာ ၊စုဆောင်းတတ်တာကြောင့် ရွှေပေါ်မြတင် အနေထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ် ။ <b> မိန်းမတွေက ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး ၊ ယောကျာ်းတွေက ချမ်းသာလွန်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး </b>ဆိုတာ အဟုတ်ပါပဲ …. ။ ရာထူးကလည်းကြီးလာ ၊ စုဆောင်းမှုကလည်း ရှိလာတော့ .. ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကို ရလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ယောကျာ်းဖြစ်သူက ခြေလှမ်းတွေ စပျက်ပါပြီ ။ မိန်းမကလည်း အယုံလွယ်ပြီး သူများစကားနားမယောင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် …ကျားကြီးလျှင် ခြေရာကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း အဲ့ဒီအချိန်မှာ မိန်းမဖြစ်သူကလည်း အသုံးဖြုန်းခုံမင်လာခဲ့ပြန်တယ်လေ … ။ သားဖြစ်သူကလည်း .. တယောက်တည်းမို့ ထင်တိုင်းသုံးဖြုန်းနေတော့တာပေါ့ ၊ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲ့ဒီအရာရှိ အမျိုးသားကြီးက သူ့သားထက်ငယ်တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ပတ်ချွဲနပ်ချွဲနောက်ကို ပါသွားပြီး မိန်းမကိုလည်း လျှော်ကြေးပေး ကွာရှင်းလိုက်တယ် … အခုဆို အိမ်တစ်ဆောင် မီးတပြောင်နဲ့ကို ပေါ်တင်ယူထားတဲ့ အထိဖြစ်နေပါပြီ ။ ကောင်မလေးကိုလည်း လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံအောင်ထားပါလျှက် … ရွယ်တူလေးတွေနဲ့ … ကြိတ်ပုန်းခုတ်သံတွေလည်း ကြားရပါသေးတယ် ။ လည်လွန်းတဲ့ဘီး ဘာသင့်သလဲတော့ မပြောတတ်တော့ပါဘူး ။
ဒီခေတ်မှာ အများစုက အိမ်ထောင်ရေးကို စီးပွားရေးသလို တွက်ချက်ယူရတယ် … အထူးသဖြင့် ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း အရွယ်ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာပေါ့ ။ တွက်ချက်ယူရတာကို လက်ခံပါတယ် … ဒီခေတ်မှာ ထမင်းရည်အတူလျှက်ရလျှက်ရ ၊ တဲအိုပျက်မှာ နေရနေရ ဆိုတာတွေက ရှိမှမရှိတော့ပဲ … စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖူလုံတဲ့ အလယ်လတ်တန်းစားပိုင်ဆိုင်မှုလောက်တော့ရျှိသင့်တာ လက်ခံပါတယ် …ဒါပေမယ့် … အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာထက် သူ့နောက်ကွယ်က ဥစ္စာဓနကို မက်မောတွယ်တာမှုများလွန်းလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရောင်းစားသလို ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို သတိမရတတ်ကြဘူး ။ အခုအဖြစ်ကိုပဲကြည့် ချက်ချင်းလက်ငင်း ကတော်နေရာရောက်သွားပြီ ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီဆိုပေမယ့် ….. မိမိရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သူများယောကျာ်းကိုကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကတော့ … သွက်သွက်ခါအောင်ကို လွင့်စင်သွားပြီ ။မချစ်မနှစ်သက်ပဲ ငွေကြေးမက်မောမှုကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရလျှင် …. အနားမှာရှိနေရတဲ့အချိန်တွေက … သာယာတဲ့ ဘ၀တစ်ခုဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ် … ရှင်လျက်နဲ့ သေနေရတဲ့ ဘ၀မျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ … အချစ်မပါ ၊ သံယောဇဉ်မရှိပဲ …ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငွေနဲ့ လဲပြီး အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ လျော့နည်းပျောက်ကွယ်ပါစေတော့လို့ပဲ ဆုတောင်းမိပါတော့တယ် … ။
မမအိတုံ ပို့စ်ထဲကအကြောင်းအရာကို နောက်နေ့ပြန်လာမန့်မယ် ..
လောလောဆယ် ကာတွန်းကိုဝေဖန်မယ် ..
ဖားဆိုတာ မြွေရဲ့အစာပဲ သူ့အစသူစားတာ လူတွေကမဆီမဆိုင် ဘာလို့ဝိုင်းရိုက်ရတာတုန်း
သူ့ဟာသူရှောင်နိုင်ရင်ရှောင် မရှောင်နိုင်ရင်သေပစေပေါ့ ..
ဂနေ့ .အင်ထှာနဲရှနယ်လ် ကလေးများနေ့တဲ့
ဘိရုမာပြည် ကလေးများနေ့မှာ မွေးတဲ့ ဇီးညလေး ကို ရန်စလိုက်ပါဦးမယ်…
ဖားဟာ မြွေရဲ့အစာ မဟုတ်သလို …
အမိုက်ကောက်တဲ့ ကလေး တွေဟာ …လမ်းဘေးခွေးတွေရဲ့ သားကောင်လည်း
ကိုအင်ဂျီး ဒါတွေ ပြောနေတာ ..လူသားမျိုးနွယ်စု ဘက်က နေပြီး
ဇီးညလေးက ဘယ်မျိုးနွယ်စုဘက်က ရပ်မှာတုန်း ဟင်င်င်င်င်
စိုးတယ် စိုးမိတယ် …စိုးထိတ်မိတော့တယ်..
မှားပါတယ် မသိရင် ကျုပ်ကပဲခွေးဝဲစားဂိုဏ်းထောင်ထားတာကျနေတာပဲ ..
ခွေးအမေကကိုယ့်ခြံထဲမှာ သားလာပေါက်ပြီးသေသွားလို့ ကျန်နေတဲ့ခွေးပေါက်စတွေကို သနားလို့ကျွေးမွေးနေတာဘာဖြစ်တုန်း .. သူတို့လည်း အသက်နဲ့ပဲ
ဆာလာအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီး သွားလွှင့်ပစ်ရမှာလား ..
အဆိပ်ကျွေးပြီး သတ်ရမှာလား .. မလုပ်နိုင်ဘူး .. ရှင့်ခြံထဲလာပေါက်မှ အဲလိုလုပ်
ကျုပ်ခွေးတွေအတွက် ကျုပ်တာဝန်ယူတယ် .. ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးပြီးသား ..
ဖားလည်း အသက်နဲ့ဘဲလေ …
ဖားကျတော့ မြွေအစာ ဆိုပီး သေပဇေ ပေါ့ …ဟုတ်စ..
အတော် မျက်နှာလိုက်တာပဲ …
အဲ့ဒါကြောင့် … အဲ့ဒါကြောင့် …
၄-၈ ဖြစ်နေတာ …
ဟာဂျာ ..ဖားမပါဂျေးလေဂျာ ..
ဖားဟာ ဒီလောက် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ဟာ ….
ဟုတ် ဟုတ် ပ ကိုဂီက ဖားသက်ပြင်းလေနော်။ဟီးးးးးးး
က လူငယ်တွေထက်ပိုဆိုးနေတယ် မမအိတုံရေ။
ဘာအကြောင်းနဲ.ပဲယူယူ အရွယ်ကွာလွန်းရင် အဆင်ပြေဖို.အရမ်းနည်းပါတယ်။
ခဏပေါ.။ ကြာလာရင် အတွေးအခေါ်ကွာတော. စိတ်ညစ်ရမယ်ထင်တယ်။
နောက်မှ ချာတိတ်ရဲ့ ဖလန်းဖလန်းအင်ဂျင်ကို လိုက်မီတော့မှ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်နေရဦးမယ်ဗျ
ကျနော် ပဲအ၀ယ်တော်လုပ် တုန်းက အသက်၆၀ကျော်
( အော်..ပြောဘို့ကျန်ခဲ့တယ် ဦးကျော်သန်းကလူပျိုကြီးပါ )…
အကိုက သူ့ညီမကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ ကောင်မလေးကလက်ခံလိုက်တာနဲ့
အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ အနေနဲ့ ၊ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ပီးတဲ့ခါကြရင် ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ၊ အလုပ်လက်မဲ့ အမျိုးသမီးကြီးငယ်မရွေးအတွက် ၊ ကောင်းမွန်မျှတ ဝင်ငွေလှတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းများ ဖန်တီးပေးစေချင်တယ်လို့ သည်ကနေ အကြံပြုချင်ပါတယ် ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာ ရှက်ကြောက်တတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလေး သဲသဲကလေး ကျန်နေပါသေးတယ် ။ အူမတောင့်တဲ့အခါကြ သီလစောင့်လာကြမှာပါဗျာ ။
ပုံ ၂ မှာ ဘယ်သူက မြွေ ဘယ်သူက ဖါး လဲ မသိဘူးဗျ..
sexy ကောင်မလေးက မြွေလား ??? အဖိုးကြီးက မြွေလား???
အင်း….. အချစ်အကြောင်း အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း မပြောချင်ဘူး
အကြောင်း အရာကောင်းတယ် အရေး အသားကောင်းတယ် ။
ဖတ်ရှု့ သွားပါတယ် ဆရာမ
ဒီခေတ်ထဲမှာဒါမျိုးတွေ တော်တော်အတွေ့များလာတာမို့ စိုးရိမ်စရာတော်တော်ကောင်းနေပြီလို့ ခံစား မိနေ တာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ အမသိတဲ့ သူဋ္ဌေးတယောက်ဆိုရင် သူ့မိန်းမက သူ့နောက်ကောင်မလေး အမေ ကို သူ့မှာသားသမီးကောမိန်းကောရှိတယ်လို့ သွားပြောတာ ကောင်မလေးအမေက ပြန်ပြော လိုက်တယ်။ သူ့သမီး ကိုဒါမျိုးရှာခိုင်းထားတာ နံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့။ သူတို့လဲ ကွဲသွားပြီး အဲဒီလူက ကောင် မလေး ကိုတရားဝင်ယူလိုက်တယ်။
It’s reallyathought-provoking article.
တို့ မြန်မာမလေးတွေ အကြောင်းကို စဉ်းစားမိတိုင်း ….
ကျုပ်ကားသမားဘ၀တုန်းက အကြောင်းလေးပြောဦးမယ် ။အဲဒီတုန်းက လူပျိုပါ …..ကျုပ်တို.အမြဲပေါင်းကြတဲ.
ကားသမားအဖွဲ.ထဲမှာ အိမ်ထောင်သည်ကတစ်ယောက်ဘဲပါတယ် …..ကျန်တဲ.သုံးယောက်ကလူပျိုတွေ ။
ဒါပေမဲ. စွံမယ်တော.မထင်နဲ. ….တကယ်စွံတာက အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်နေတယ် ။ ကျုပ်တို.များညံ.ချက်။
အသက်အရွယ် သိပ်ကွာတာက မကောင်းတာတော.အမှန်ဘဲဗျ ၊ အမြင်ချင်းလဲမတူဘူးလေ ………။
ပုံ ၁က.. သက်သက်ဗိုလ်ကျတာ..
ပုံ၂ကလည်း. လူယောက်ျားက.. လူမိန်းမနဲ့ ၂ဦးသဘောတူတွဲသွားတာ.. ကြားက..ငထွား..ခါးနာပြီး.. ဘာများလုပ်ချင်နေကြတယ်မသိ..။
Rights တွေကျော် လွန်းနေတယ်.. ။
ပိုက်ဆံရှိသူက.. အပျိုရွယ်..အငယ်တွေကို.. လက်ထပ်တာ.. လောကသဘာဝဖြစ်ပါကြောင်း..
အငယ်အနှောင်းမထားပဲ.. တဖက်ကိုဖြတ်ပြီး.. (ဥပဒေအရလျှော်စရာလျှော်ပေးပြီး.. )လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်ကြောင်း..
94-Year-Old Billionaire To Marry For The 5th Time, Jokes That He …
by Brian Solomon – More by Brian Solomon
Apr 16, 2012 – Austrian retail tycoon Karl Wlaschek (net worth: $4.7 billion), who plans to get married in the next few days, is the fifth-oldest billionaire in the …
မမအိတုံရေ အဲဒီလိုမျိုးတွေ့ဖူးတယ် ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းကပဲ
မယားကြီးက တရုတ်ပြည်မှာ .. သားသမီးတွေက ဒီမှာလည်းရှိတယ်
ကောင်မလေးဘက်က မချမ်းသာပေမယ့် မဆင်းရဲပါဘူး
အသက်ကြီးပေမဲ့လည်း အသဲ မကြီးသေးပါဘူးတဲ့ ..
သွားမပါလေ ကောင်းလေ .. မြန်မြန်သေလေ ရှိတာအကုန်ရလေ တဲ့ .. :grin: :grin:
ထင်သာ မြင်သာ ခောတ်ကြီးလေ…
အို …..အမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းတို့ ရှုကြပါကုန်လော……. ထိုသရုပ်သည်ကား အမျိုးသားများ၏ အတွင်းသဏ္ဍန် အစစ်အမှန်ဖြစ်ပေတော့သည်။
မပြည့်သော ဆန္ဒများအတွက် ပူလောင်ရပါသီ
ဒီလိုမျိုး အဖြစ်တွေက ဟိုးအရင်တုန်းကတည်းက ရှိနေခဲ့တာပါ …
ဘုရားဟော ဝတ္ထုတွေထဲမှာတောင် တွေ့နိုင်ပါတယ် …
ဒေဝဒတ် အလောင်း ပုဏ္ဏားအိုကြီးက
စိဉ္စမာနအလောင်း မိန်းမပျိုလေးကို ယူခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်လည်း ပါပါသေးတယ် …
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အသွင်တူလို့ အိမ်ထောင်ဖြစ်တာလို့ပဲ မှတ်သင့်ပါတယ် ..
ဟာ .. ဒီကောင်မ ငွေမက်ပြီး အဖိုးကြီး ကောက်ယူလိုက်တာလို့ ဘေးကနေ ဒေါမနဿပွားနေရင်
သူများတွေ ပစ်တဲ့ခဲ ကိုယ့်ပါ ရောထိတတ်ပါတယ် …
ဒါက ကျနော့် အမြင်ပါ ..
ဓါးငမိုးဆိုလို့ … ဘယ်သူလဲ မှတ်တယ် … ခြောက်မျက်နှာအန်စာတုံးကိုး …ဟိဟိ ။
မျက်နှာများတားခြင်းတူလို့ … ကာကွယ်ပေးချင်တာလား … အဟဲဟဲ (နောက်တာပါအေ)
ကိုအန်စာတုံးရေ … သူ့ အိုးနဲ့ သူ့ဆန် … တန်တာရတာကို .. ဘေးကနေ ကျလိကျလိမဖြစ်ပေမယ့် … မောင်နှမ ၊ သားအမိအတူမြင်လျှင် မသင့်တော်တဲ့ အပြုမူမျိုး လမ်းထွက်လျှင် မြင်မကောင်းတာမျိုး လုပ်နေတော့ … မုဒိတ္တာမပွားနိုင်တော့လို့ … ဖွပါပြီဗျို့ …. ။ ဟိဟိ
ဒီဂတော့ သိဝူးမှတ်လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ မန့်ထည့်လိုက်တာ ..
သူဂ သိနေသတော့ ..
မျက်နှာများပေမယ့် .. ခုထိ .. ခြောက်မျက်နှာ ပြည့်သေးပါဘူးနော့ ..
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာထက် သူ့နောက်ကွယ်က ဥစ္စာဓနကို မက်မောတွယ်တာမှုများလွန်းလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရောင်းစားသလို ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို သတိမရတတ်ကြဘူး ။ အခုအဖြစ်ကိုပဲကြည့် ချက်ချင်းလက်ငင်း ကတော်နေရာရောက်သွားပြီ ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီ
အင်း…ဒုက္ခပါပဲ…စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ သူတို့(ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငွေနဲ့ လဲပြီး အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ) မမြင်အောင်ဝှက်ထားမှ။
မေးခွင့်ရရင်ကောင်မလေးကို ၁ ခုလောက်မေးချင်လိုက်တာ…….
လုပ်ချင်ရာလုပ် အချစ်ကိုတော့ ခုတုံးမလုပ်နဲ့..
ဟို နိုင်ငံမှာများ ကြားပါတယ်
အသက် ၅၀ ကျော်လား ၆၀ ကျော်လား အဖွားကြီးက Bla Bla Bla ဆိုပဲ
အဲသည် ဘာမှုးကြီးရဲ့အဖွားကြီးကတော့ တော်တော့ကို ညံ့ဖျင်းသကိုး
ယောက်ျားများ …ခင်ဗျားတို့ လည်း သိတဲ့ အတိုင်းပဲ …..၀င်ကစွတ် ဗျို့ 
ခေတ်ကပြောင်းနေပြီ….လိမ်ဖို့ …ရေသာခို နောက်ချန်ခဲ့ဖို့မကြံနဲ့ 
အိမ်ထောင်ရေး…..တဲ့…..တူနှစ်ကိုယ် ဘာညာဘာညာ ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး
တူနှစ်ကိုယ် ကိုယ်ကောင်း သူကောင်း ခေတ်ဖြစ်နေပြီ
ကိုယ်လည်းကောင်း သူလည်းကောင်း ရင်ကောင်း……မကောင်းရင်တော့
ကိုယ်ကောင်းဖို့ ပဲ လုပ်သွားမှာပဲ ………
ပါတိတ် အဆင်ဆန်းကြီးပဲ ၀တ်မနေကြနဲ့….လင်လည်း နှစ်ချိုက် ကိုယ်လည်းကြိုက်မဲ့
ကြားဖူးတာ… သက်တော်ခြောက်ဆယ် ဝါတော်လေးဆယ်ရှိတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို သူ့သူငယ်ချင်း ဗေဒင်လက္ခဏာတတ် ဘုန်းကြီးက တွက်ချက်ပီး ကိုယ်တော်မိန်းမရကိန်းရှိတယ် လူထွက်ဖို့မြင်တယ်ပြောတော့ ဆရာတော်နဲ့ ကပ္ပိယတွေကရယ်ကြတယ်။ တနေ့ကြတော့ ဆွမ်းပို့နေဂျ ဒကာမကြီးက သမီးဆယ့်ခြောက်နှစ်ကို သူတို့သဘောတူတဲ့လူနဲ့ အိမ်ထောင်ချပေးဖို့စီမံတယ်။ သမီးဖြစ်သူက လက်မခံဘဲ ရွာဦးကျောင်းကဘုန်းကြီကိုပဲ ယူမယ်လို့ဆိုသတဲ့။ ဒါနဲ့ မိဘတွေလည်း ဝေခွဲမတတ် သို့လောသို့လောဖြစ်ပီး ဆရာတော်နားပေါက်သွားတယ်။ ဆရာတော်လည်း ရှက်ပီး ကောင်မလေးဂို ကြိမ်လုံးနဲ့ ဆော်တာပေါ့။ နောက်တော့ လက်လွန်သွားလို့ သနားသွားရာဂနေ ညားသွားဂျလေသတည်းဒဲ့…။ ဦးကြောင်ကြီးလည်း ကောက်ရိုးတမျှင် ဆန်ကွဲတစေ့ နိုင်ချိန်အထိ စိတ်မလျှော့ဘူးကွ။ ငါ့မှာ မိုးစက်ဂလေးရှိဒယ်..ပုရ်ှဂလေးရှိဒယ်..ဦးပေါက်တူမဂလေးရှိဒယ်…အန်တီပဒုမ္မာတူမဂလေးလည်းရှိဒယ်..အခုနောက်ဆုံး ကျီးမိုက်ဆိုတဲ့အန်တယ့်ဆီမှာလည်း သမီးဂလေးရှိသေးသဒဲ့.ကြေးမုံဂျီးဂိုဒေါ့ မင်္ဂလာပွဲကြမှ ပန်းကန်ဆေးခိုင်းမယ်။
တစ်ယောက်တည်း အဲလေး တစ်ကောင်တည်းလောဘမကြီးနဲ့လေ………အနော်တို့အတွက်လည်းချန်ထားပါအုံး…..
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကို မနေ့ကမှ ကြားခဲ့တယ် …. ။
မိန်းမဖြစ်သူ အန်တီကြီး စိတ်ဖောက်ပြန်လို့ … ရွာသာကြီး ပို့လိုက်ရပါတယ်တဲ့ ….. ။ ဟိုမှာလည်း အော်ဟစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမယ်လို့ ကြိမ်းဝါးနေတဲ့အတွက် သေချာစောင့်ထားရပါသတဲ့ ….. ။
သြော် .. အချစ် အချစ် လူကို တကယ် ရူးသွပ်စေခဲ့ပါလားနော် … ။
သူ့ အကြောင်း သိရပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် .. မိသားစု ဆုံး ရှုံးတဲ့ ဒဏ် ၊ လင်ဆုံးတဲ့ ဒဏ်တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပြီး .. အပြင်ပန်းသာ ဟန်ဆောင်နေပေမယ့် .. စိတ်ထဲ အတော် ကြေကွဲနေရှာမှာပေါ့လေ … ဒီဒဏ်တွေ မခံစားနိုင်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ ….
မိန်းကလေးတိုင်းမိမိတို့၏ အပျိုစင်ဘ၀လေးတန်ဖိုးထားတက်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။။